Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Kanada
Olee otú ị ga-esi agwa anyị na ị chọrọ ịbịa legharịa anya? Ọ bụrụ na unu erughị mmadụ iri abụọ, “Pịa ebe e dere “Kwuo Oge Ị Ga-achọ Ịbịa Legharịa Anya​—Maka Ndị Na-erughị Mmadụ Iri Abụọ.” Ma ọ bụghị ya, zitere anyị ozi iimel n’adres ndị a tourdesk.ca@jw.org iji kwuo na unu ga-adị iri abụọ ma ọ bụ karịa.
Kwuo Oge Ị Ga-achọ Ịbịa Legharịa Anya​—Maka Ndị Na-erughị Mmadụ Iri Abụọ
Kwa afọ, a na-ebi akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl karịrị narị nde atọ. Ha na-ebi akwụkwọ ndị a n’ihe karịrị narị asụsụ abụọ ma na-ebugakwara ha alaka ụlọ ọrụ dị iche iche dị n’ụwa na ọgbakọ Ndịàmà Jehova karịrị puku iri na ise na Kanada, Karịbian nakwa Amerịka.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Kanada